ISeychelles ayilolizwe eliXhathayo ngoku ngeOstreliya ngaphezulu kweOmicron eyahlukaniso
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » ISeychelles ayilolizwe eliXhathayo ngoku ngeOstreliya ngaphezulu kweOmicron eyahlukaniso
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Seychelles Australia uhambo
Ingxelo yeendaba ekhutshwe yi-ofisi yeNkulumbuso yase-Australia nge-29 kaNovemba ikuqinisekisile oko Seytshels isusiwe kuluhlu lwamazwe ebekelwe imiqathango kulandela iinkxalabo zokwahluka kwe-Omicron okuchongwe kumazwe athile akuMazantsi e-Afrika kwaye ngoku sele kufunyaniswe e-Australia.
“Ngokwecebiso elingakumbi elivela kuNjingalwazi uKelly, [iGosa eliyiNtloko lezoNyango laseOstreliya] iSeychelles isusiwe kuluhlu lwamazwe axhalabileyo,” ingxelo ichaziwe.
UMphathiswa wezeMicimbi yezangaphandle kunye noKhenketho uMnumzana Sylvestre Radegonde uye wavakalisa ukwaneliseka ukuba iSeychelles isusiwe kuluhlu lwase-Australia lwenkxalabo. "ISebe lethu leMicimbi yezaNgaphandle lingenelele kunye nabalingane bethu baseOstreliya kwangoko emva kokufumana ingcebiso, ingxoxo ekhokelele kwisiphumo esihle."
Sinemilinganiselo yezempilo eyomeleleyo ekhoyo kubo bonke abakhweli abafikayo ekufuneka bebonelele ngobungqina beziphumo zovavanyo lwe-PCR ezithathiweyo kwiiyure ezingama-72 okanye ngaphantsi phambi kokumka kwilizwe labo. Abakhweli banokuhlala kuphela kumaziko aphuhliswe imigaqo yokhuseleko yabasebenzi babo kunye neendwendwe kunye iqinisekisiwe-COVID ekhuselekileyo nguMphathiswa wezeMpilo, kwaye wonke umntu kufuneka anxibe iimaski kwiindawo zikawonke-wonke, aqinisekise ukuhambela kude ekuhlaleni kwaye aphephe ukuhlanganisana ngokwamaqela. Sithathe onke amanyathelo okuqinisekisa ukhuseleko lweendwendwe zethu kunye nabemi bethu, kwaye abatyeleli abaya eSeychelles banokuzisebenzisa kangangoko iiholide zabo kunye nendawo yethu kuzo zonke izolile, ”utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Ngeli xesha, emva kwentlanganiso ngeCawe, umhla wama-28 kuNovemba wekomiti ephezulu yaseSeychelles kwimpendulo ye-COVID yesizwe echotshelwe nguMongameli weRiphabhlikhi uMnu. Wavel Ramkalawan, iNdlu yoMbuso yabhengeza ngoMvulo, wama-29 kuNovemba ukuba ukwahluka kwe-Omicron kubhaqwe eMzantsi Afrika kunye neqela elininzi. amanye amazwe akafunyaniswanga kwiZiqithi zoLwandlekazi lwaseIndiya.
I-Ofisi yoMphathiswa wezeMpilo ngecala lakhe ikuthintele ukungena eSeychelles ukusuka ngoMgqibelo wama-28 kaNovemba de kube kuphinde kwanikwa isaziso kwiindwendwe ezisuka eMzantsi Afrika, eBotswana, e-Eswatini, eLesotho, eMozambique, eNamibia naseZimbabwe. La manyathelo matsha afuna ukuba bonke abantu abasele beseSeychelles bebekula mazwe kwezi veki zimbini zidlulileyo baye kuvavanyo lwePCR ukuba bebeseSeychelles ukusuka ezintlanu (5) ukuya kwiintsuku ezilishumi elinesine (14) emva kokuba befikile. Abo bahlala eSeychelles ixesha elingaphantsi kweentsuku ezintlanu (5) kufuneka balinde uSuku lwe-5 ukuya kuvavanyo lwe-PCR.
Bonke abantu baseSeychellois kunye nabahlali ababuyela eSeychelles abaye nakweliphi na lala mazwe kwezi veki zimbini zidlulileyo kufuneka bazivalele bodwa kwaye bathathe uvavanyo lwePCR olunyanzelekileyo ngoSuku lwesi-5 emva kokufika. Inkampani yeenqwelomoya yesizwe iAir Seychelles irhoxise zonke iinqwelomoya ezisuka eRhawutini zisiya eSeychelles ngaphandle kwezo zomhla woku-1 kweyoMnga, owe-17 kweyoMnga nowe-19 kweyoMnga.
I-Seychelles inelona zinga liphezulu lokugonya kwihlabathi kwaye ngoku inikezela ngethamo lesithathu le-booster Pfizer-BioNTech kubantu bayo abadala kunye nokugonya ulutsha olufikisayo. Iphinde yavula imida yayo kukhenketho ngomhla wama-25 kweyoKwindla yowama-2021, okubangele ukuphinda kuqhawukene ngamandla kushishino lwezokhenketho lwelizwe, nto leyo eqhubela ukuchacha koqoqosho lwayo.